VIEWSCAN X64 FREE DOWNLOAD NA-ENWEGHỊ WATERMARK - MMEMME NYOCHA - 2019
Enwere ikpe mgbe interface nke usoro nyocha ọkọlọtọ adịghị arụ ọrụ. Nke a, nke mbụ, na-ezo aka na ụdị ochie nke ngwaọrụ. Iji gbakwunye ike na nyocha a na-emebeghị, enwere ngwa ndị ọzọ pụrụ iche nke na-eme ọ bụghị naanị iweli elu arụmọrụ nke ngwaọrụ ahụ, kamakwa inye ikike nke digitally na-aghọta ederede nke onyinyo ahụ.
Otu n'ime mmemme ndị a, bụ nke nwere ike ịme ọrụ nke ngwa ngwa maka ọtụtụ ụdị scanners, bụ ụlọ ọrụ shareware Hamware - Vuyscan. Ngwa ahụ nwere nhọrọ nke ntọala nyocha dị elu, yana nchịkọta ederede.
Anyị na-akwado ka ị hụ: Nhọrọ ndị ọzọ maka ederede
Isi ọrụ nke VueScan bụ iji nyochaa akwụkwọ. ViewScan ga-enwe ike iji dochie ihe eji emepụta ihe dị iche iche maka nyochaa na mbubata foto maka ngwaọrụ site na 35 ndị ​​nrụpụta dị iche iche, gụnyere ụdị ndị a ma ama dị ka HP, Samsung, Canon, Panasonic, Xerox, Polaroid, Kodak, wdg. na ụdị dijitalụ dijital iri na ise. Ọ nwere ike ịrụ ọrụ ya ọbụlagodi na ndị ọkwọ ụgbọala nke ngwaọrụ ndị a etinyebeghị na kọmputa ahụ.
VueScan, kama nke ndị ọkwọ ụgbọala na-ahụ maka ọkọlọtọ, nke na-enweghị ike iji njirimara nzuzo nke scanners, jiri nkà na ụzụ ya. Nke a na-enye gị ohere ịgbasa ikike nke ngwa ahụ, jiri nhazi nke ngwaike ziri ezi karị, na-eme mgbanwe n'ụzọ dị mfe iji nhazi ihe oyiyi ahụ, site na iji usoro ntinye foto, na-emepụta scanning batch.
Tụkwasị na nke ahụ, usoro ihe omume ahụ nwere ikike iji dozie nsogbu oyiyi site na usoro nyocha nke infrared.
Dabere na mkpa ọrụ a na-arụ na ahụmahụ nke onye ọrụ, ị nwere ike ịhọrọ otu n'ime ụdị ntọala atọ: ntọala, ọkọlọtọ, na ọkachamara. Ụdị nke ikpeazụ ga-enwe ike ịkọwapụta ihe niile dị mkpa maka nyochaa, mana, n'aka nke ya, chọrọ ụfọdụ ihe ọmụma na nkà sitere n'aka onye ọrụ ahụ.
Zọpụta nsonaazụ ọchụchọ
VueScan nwere ọrụ dị oke mkpa iji zọpụta nsonaazụ nyocha na faịlụ. Ị nwere ike ịchekwa iṅomi ahụ na usoro ndị a: PDF, TIFF, JPG. Otú ọ dị, ọtụtụ ngwaọrụ ndị ọzọ maka nyocha na njirimara na-enye ndị ọzọ nhọrọ maka ịchekwa nsonaazụ.
Mgbe ị na-azọpụta, faịlụ ahụ ga-adị maka nhazi na ndozi site na ngwa ndị ọzọ.
Ekwesiri ighota na ihe odide ederede nke ViewScan adighi ike. Tụkwasị na nke ahụ, nchịkwa nke usoro ntinye akwụkwọ adịghị mfe. Iji mee nke a, oge ọbụla ịmalite, ọ bụrụ na ịchọrọ ịme ihe ederede, ịkwesịrị ịmegharị usoro ihe omume ahụ. N'otu oge ahụ, na mmepụta ihe edere ederede nwere ike ịchekwa naanị n'ụdị abụọ: PDF na RTF.
Na mgbakwunye, site na ndabara, Vuescan nwere ike ịmata ederede site na Bekee. Iji nyochaa na asụsụ ọzọ, ịkwesịrị ibudata faịlụ asụsụ pụrụ iche site na saịtị ọrụ nke ngwaahịa a, nke yiri ka ọ bụ usoro na-adịghị mma. Na mkpokọta, na mgbakwunye na iwu Bekee, 32 nhọrọ dị maka nbudata, gụnyere Russian.
Advanced scanning management capabilities;
Ọnụnọ nke interface asụsụ Russian.
Abere ọnụ ọgụgụ nke usoro iji zọpụta nsonaazụ nyocha;
Ike ike ederede ederede;
Usoro nkwenye na-adịghị mma;
Oge ole na ole eji eji nnwere onwe n'efu.
ViewScan bu n'uche, ruo n'ókè ka ukwuu, maka nyochaa ngwa ngwa ma dị elu nke ihe oyiyi karịa maka mmata ha. Mana, ma ọ bụrụ na ọ dịghị ihe ngwọta ọzọ maka ederede digitizing, mgbe ahụ, nke a nwere ike dabara adaba.
Download ViewScan Trial Version
Ntughari akụrụngwa kachasị mma Ridioc ABBYY FineReader Na-agụ
VueScan bụ usoro bara uru nke a chọrọ iji dochie anya interface ọkọlọtọ nke scanner jikọọ na kọmputa na nsụgharị njirimara nke dị mfe ma rụọ ọrụ.
Onye Mmepụta: Hamrick Software
Ọnụ: $ 50